Tanzania na-emeghe igwe n’elu ụgbọ elu ndị Kenya debara aha ha na Kenya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Tanzania na-emeghe igwe n’elu ụgbọ elu ndị Kenya debara aha ha na Kenya
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Tanzania mepere mbara igwe ya
Tanzania weliri ya machibido iwu na ụgbọ elu ndị Kenya edebanyere aha, na-emepe mmekorita ohuru na mbara igwe nke East Africa mgbe otu ọnwa na ọkara kwụrụ na mbara igwe mpaghara.
Ozi ọma ahụ ruru ndị njem na ndị njem nleta na East Africa n'ụtụtụ Wenesde mgbe Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA) wepụtara nkwupụta ụtụtụ nke ụtụtụ na-ekwupụta njedebe nke mmachibido iwu ahụ enyere ndị ọrụ ụgbọelu Kenya.
Kenya na Tanzania abụrụla ezigbo ndị mmekọ na mmepe nke otu mpaghara njem njegharị na mpaghara mana ha batara na nguzo mgbe ntiwapụ nke Oria ojoo COVID-19 n'ọnwa Machị mgbe gọọmentị Kenya wepụrụ Tanzania na ndepụta nke ihe dịka mba 111 bụ ndị enyere ndị njem ha ohere ịbanye Kenya na-enweghị iche iche ụbọchị iri na anọ.
N’ịzaghachi usoro gọọmentị Kenya, gọọmentị Tanzania kagburu nnabata ya maka ụgbọ elu Kenya Airways (KQ) gaa na mbara igwe Tanzania malite na August 1, 2020 rue oge nzaghachi Kenya.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị njem nleta gụnyere ndị njem nleta na ndị na-ahụ maka ndị njem safari, ndị ọrụ na-ahụ maka ala, ndị ọrụ njem, na ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ ebiliwo olu ha na-akpọ ndị gọọmentị 2 ka ha dozie esemokwu ahụ na mbọ iji chekwaa njem nleta mpaghara site na mbibi ọzọ mgbe ọrịa a gbusịrị.
Site na Mọnde nke izu na-abịa, Kenya Airways (KQ), onye na-ebu mba Kenya, yana ndị ụgbọ elu 3 ndị ọzọ pere mpe si Nairobi ga-abanye na mbara igwe Tanzania.
Lọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu na Tanzania (TCAA) na Wednesde, Septemba 16, kwupụtara na ha ebulaola nkwusioru ndị ọrụ ụgbọelu Kenya.
Na nkwupụta, Director General Director nke TCAA Hamza Johari kwuru na ikike ahụ na-arụ ọrụ mmeghachi omume mgbe KCAA tinyechara Tanzania na ndepụta nke mba ndị ewepụrụ na ụbọchị iri na anọ nke iwu kwụrụ iche mgbe ha rutere.
Onye isi oche TCAA, General Hamza Johari kwuru, "N'iburu nke a na na ntughari okwu, Tanzania ebulala nkwusioru maka ndị ọrụ Kenya niile bụ Kenya Kenya, Fly 540 Limited, Safarilink Aviation na AirKenya Express Limited."
Maazị Johari kwukwara na ịmaliteghachi na mweghachi nke ụgbọ elu maka ndị ọrụ Kenya niile nwere mmetụta ozugbo na a gwala ndị ọrụ ụgbọ njem Kenya.
O kwuru na "United Republic of Tanzania ga-agbasi mbọ ike ịgbaso ụkpụrụ bụ isi nke Nkwekọrịta Chicago na 1944 na Bilateral Air Services Agreement n'etiti mba abụọ,"
Tupu mmachibido iwu ahụ, Kenyan Airways na-arụ ọrụ ugbo elu ugboro abụọ kwa ụbọchị n'etiti nnukwu ọdụ ụgbọ elu Tanzania na Dar es Salaam, Kilimanjaro, na Zanzibar, na-ejikọ ndị njem mpaghara na mba ụwa na isi ya na Nairobi.
AirKenya Express, Fly540, na Safarilink Aviation na-efe kwa ụbọchị ụgbọ elu na-aga ma na-esi Kilimanjaro, Dar es Salaam, na Zanzibar.
Kemgbe nloghachi nke ụgbọ elu mba ofesi na August 1, Kenya Airways, tinyere ndị ọrụ ụgbọelu Kenya atọ ndị ọzọ bụ AirKenya Express, Fly3, na Safarilink Aviation, ka atọrọla gaa na mbara igwe ọzọ.
Iguzo dị ka ụgbọ elu na-eduga na East na Central Africa, Kenya Airways bụ otu isi ụgbọ elu na-ejikọ mpaghara Afrika. Keyzọ ya bụ isi n’Africa kpuchitere steeti ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa, North Africa, Central Africa, Southern Africa, East Africa, na agwaetiti Indian Ocean.